Qalbi aniga waaye: Qiso naxdina oo walaalkeen qabsatey - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
naxdinWarsame magaciisa saxda ah maaha waa shaqaale ka mida hay’adaha dawliga ah. Hooyadii ayaa ku bukootay degmada Buulabarde, waxana uu rabaa inuu si deg dega u tago.
Waxaa ku adkaatay in uu u ambabaxo goobta hooyadiis sakaraadka ku tahay waayo waxa uu ka cabsanayey in ay gacanta ku dhigaan kooxda gaalaynta Muslimiinta ee Alshabaab, dabadeedna ay dhegta dhiigga u daraan, maadaama ay Muslimiinta dhiigooda xalaalaysteen.
Isaga oo sidii dhagta ugu haaya Telkii ayuu soo istaagay iridka guriga, wuxuuna eegay Geedka cidda hoos joogta, waxuu arkay 4 nin oo cimaamado madaxa iyo indhaha ugu duuban yihiin oo Geedka hoostiisa fadhiya.
Telkii ayuu damiyey wuxuuna u soo dhaqaaqay goobtii looga yeeray, waxaa lagu yiri salaamu calaykun, waxa uu ugu jawaabay calaykumbwa salaam.
Mar kale ayaa lagu yiri Hooyadaa see tahay? wuxuu yiri Waxay ku jirtaa Kooma ogaalna ma leh— mid ka mid ah ragii u yeeray ayaa yiri markii hooyadaa meel u dhacdo ayaan isu imaanaynaa ee sidaas wax u ogoow— waayahay ayuu yiri isaga oo naxsan, murugaysan isla markaana hadalku ka soo bixi la’yahay.
Isla amaalintaas galinkeedii dambe ayay hooyadiis xijaabatay, markiina waa la aasay– 3 maalmood oo tacsi ah ayaa la joogay, maalinkii xigay goor barqa horaad ah ayaa mar kale looga yeeray Telkiisa isaga oo isu qabanqaabinaya in uu soo ambabaxo, waxaa lagu yiri noogu imaaw geedka hoostiisa.
Durbadiiba goobtii ayuu yimid, markaan raggii uu u yimid gafuurada uma duubnayn isagana cidna kama aqoonsan, Waxayna u sheegeen in ay yihiin ragga uu u malaynayey Macnaha dhiig miiradka argagixisada Alshabaab.
Ugu dambayntii waxay ku yiraahdeen maxaad nooga ogashahay Mushaharka aad qaadato– wuxuu yiri wixii aad iga codsataan——– waxay ku yiraahdeen $30 Bil kasta ayaan kaa raabnaa, naftaaduna waa kuu Amaan, waayahay, waxna kama qabo ayuu yiri—wuxuu intaas u raaciyey intee ayaan ku soo xawilayaa lacagta?
Waxay yiraahdeen qofkii kuu yimaada oo ku yiraahdo ANIGA WAAYE ayaad siinaysaa $30 doolar.
Sidaas ayuu uga soo tagay, waxaa la gaaray mushaar qaadkii bisha wuuna soo qaatay, wuxuu soo abaaray gurigiisii waxaa u jooogay Xaas iyo laba ciyaal ah,.
Markii uu guriga soo galay ayuu arkay xaaskiisii oo ku mashquulsan ama ku hadlayso Teleefoon, wuu ka gudbay qolka ayuuna galay, waxaa ka soo dabagashay gacalisadiisii uu aadka u jeclaa kuna kalsoonaa, hab intay siisay oo laabtiisa laabteeda si xoogan ugu qabatay ayay si degen u tiri Macaane qalbi ANIGA WAAYE.
Wuu isku naxay lama filaana way ku noqotay in xaaskiisu ay ka mid noqoto Argagaxisada kooxda gaalaynta. Naxdin awgeed ayuu dhulka ku dhacay, waxa la geeyay dhakhtar oo ilaa haddana ku jiraa ayadoo lagu sheegay waali.